Enresto Valverde Oo Haysta Fursad Ka Fiican Xili Ciyaareedyadii Pep Guardiola & Luis Enrique Ay Min Saddexda Koob Kula Soo Guulaysteen Barcelona – GOOL24.NET
Enresto Valverde Oo Haysta Fursad Ka Fiican Xili Ciyaareedyadii Pep Guardiola & Luis Enrique Ay Min Saddexda Koob Kula Soo Guulaysteen Barcelona
Wargayska Marca ee caasimada Madrid ee dalka Spain ka soo baxa ayaa warbixin ku soo bandhigay qaabka uu Ernesto Valverde u haysto dariiq ka sahlan kuwii ay soo mareen Pep Guardiola iyo Luis Enrique markii ay Barcelona min saddexda koob kula soo guulaysteen. Marca ayaa muujiyay sida uu Valverde ku noqon karo macalinkii saddexaad ee kaliya ee kubbada cagta Spain hal xili ciyaareedkan saddexda koob soo qaaday.
Pep Guardiola ayaa ahaa tababarihii ugu horeeyay ee abid saddexda koob kaga soo guulaystay Spain isaga oo sanadkii 2009 kii kooxda Barcelona u soo qaaday koobabka La Liga, Champions League iyo Copa Del Rey, waxayna ahayd taariikh cusub oo uu Spain ka sameeyay.
Laakiin sanadkii 2015 kii Luis Enrique ayaa raacday dariiqii uu Pep Guardiola jideeyay wuxuuna markii labaad Barcelona ka caawiyay in ay saddexda koob ee ay xili ciyaareedka u tartamaysay kuwada guulaysatay markaas oo ay Balaugrana markii labaad diwaan gashaday saddexda koob ee kala ah Champions League, La Liga iyo Copa Del Rey.
Sida warbixinta Marca lagu xusay Ernesto Valverde ayaa marka lays barbar dhigo Guardiola iyo Luis Enrique markii ay min saddexda koob ku soo guulaysteen ka fursad fiican sababo jiro awgeed iyada oo isbarbar dhig lagu sameeyay.
Ugu horayn fursada ugu wayn ee ay kooxda Ernesto Valverde haysato ayaa ah in 11 dhibcood oo nadiif ah ay ka sarayso kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Atletico Madrid iyada oo kulankii Camp Nou ee La Liga iska reebtay kooxda Diego Simeone.
Marka ay noqoto tartanka kooxaha Yurub ee UEFA Champions League, Barcelona ayaa lagu aadiyay dariiq ka sahlan xili ciyaareedyadii 2008/2009 iyo 2014/2015 markii ay Guardiola iyo Enrique min saddexda koob ku soo guulaysteen.
Xili ciyaareedkii Guardiola saddexda koob ku guulaystay waxaa Barcelona siddeed dhamaadka lagu aadiyay kooxda Bayern Munich halka Valverde uu haysto kulanka AS Roma laakiin sanadkii 2015 kii Luis Enrique ayay qasab ku noqotay in siddeed dhamaadkii Champions League uu soo dhaafay kooxda Paris Saint-Germain.
Marca ayaa lagu xusay in fursada uu hadda Valverde u haysto in saddexda koob uu Barca u qaadi karaa ay ka fiican tahay halkii ay waqtigan oo kale marayeen Guardiola iyo Enrique markii ay min saddexda koob ku soo guulaysteen.
Laakiin hal fursad oo Guardiola iyo Enrique ay kaga fiicnaayeen Valverde ayaa ah kooxaha ay la ciyaareen finalka Copa Del Rey oo ay labaduba koobka boqorka Spain ay ka qaadeen kooxda Athletic Bilbao laakiin Valverde ayaa wajihi doona halista kooxda Sevilla oo ay ku balansan yihiin finalka Copa Del Rey.
Laakiin Valverde ayaa Enrique iyo Guardiola kaga duwan in heerkan oo kale uu guuldaro la’aan kaga soo gaadhay horyaalka La Liga iyo Champions League, waana fursad kale oo muujinaysa in Valverde uu noqon karo macalinkii saddexaad ee kubbada cagta Spain taariikhdan ka samayn kara.
Laakiin inkasta oo ay rajadan Barcelona dareemayso ilaa hadda ma jiro wax ay ku guulaysatay, waana rajo kaliya oo ay ku xidhan tahay sida ay xili ciyaareedka ku dhamaysato.
Waa dareen maskaxiyeed ee aan ubaahanahay 3dley waa waajibaadka saaran velverde waxeynu dareemeyney bilaw ilaa ineynu heysanay 3dley waa dariiq fudud marka aad sii tixraacdid champions league oo aan sideeda lajoogno roma halka laliga aan heysano sevilla ,vilerial ,real madrid ,valencia,real sochidad, iyo weliba delreyga oo aan heysano(copse melga)svella(final).waa dariiq udhaw saadaalin 3dley ah waana soo dhaweyneynaa midaanoo kale .
Waa Macalinka Addunka Ernesto Fariid Wuxu Wax Ka Badalay Dafacyadi Barcelona Isago Kor Uso Qaday Tayada Dafaca Sina Xojiyey Dhexda Kana Dhegay Mid Adeega Oo Aanan Lalaqeybsanen Kubadda 👑👑👑